အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: တို့ရဲ့ ဧရာဝတီ
16 Responses to “တို့ရဲ့ ဧရာဝတီ”
ဘယ်သူ့ပယောဂကြောင့်မို့ မပျက်စီး မတိမ်ကောပါစေနဲ့။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်း `ရာဇ၀င်များရဲ့သတို့သမီး´ ကို ကြားယောင်နေမိတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပင်မအသက်သွေးကြောလည်း ဖြစ်ပါတယ်. လူသားဆန်မှုမရှိတဲ့ လူတချို့ရဲ့ လောဘစိတ်တွေကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး မတိမ်ကောပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲနော်...
ဧရာဝတီ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သိပ်ကြိုက်တာ ကိုယ်က ဧရာဝတီသူ ဆိုတော့လေ အခုလို အက်ဆေး တစ်ပုဒ်ဖတ်ရတာ ကျေးဇူး
ဗမာလူမျိုးနဲ့ ဧရာဝတီက ခွဲခြားမရစကောင်းပါဘူး။
အစ်မလိုဘဲ ဧရာဝတီရဲ့ ရေစီးသံကို အမြဲတမ်းနားဆင်ခွင့်ရချင်သူပါဗျာ..
အခု စာလေးနဲ့ တွဲမြင်မိပါတယ်။
ခုလို ဧရာတီ အကြောင်းလေးကို သေချာစွာ ရေထားတော့ အရမ်းကို ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို လည်း မျက်စိထဲမြင်ယောင်မိတယ် မချောရေ ..
ဒို့ရဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ဟာ ရာဇဝင်ထဲက သတို့သမီလေးလို အမြဲ လှပနေနိုင်ပါစေလို့ အမြဲ ဆုတောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ
I Love Irrawaddy river. It helped our country for very long time. And, it is helping us still now. It will help our generations in future forever.
Mg Ogga said...
ဧရာဝတီမရှိရင် ဗမာမရှိ မြန်မာမရှိ မြန်မာပြည်ဆိုတာလဲ မရှိ ပင်လယ်ဖီဖာဖျံတွေက မိုးမခပင်ကြီးကို ချစ်တယ်လို့ ပြောပြီ မိုးမခအခေါက်တွေ ခွာစားကြတော့ မိုးမခပင်ကြီးလည်း သေရောတဲ့ အခု အဲဒီလိုဖြစ်နေပြီ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာကနေတားရမှာပဲ ဒီ အက်ဆေးလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ
မမရေ...မမကြောင့် ညီမလေးတော့ မြစ်ကြီးနားကို အရမ်းသတိရသွားပြန်ပြီ...ပြန်လျော်ပေး...ညီမလေးတို့တွေ တစ်ခေါက်လောက် အတူတူပြန်သွားကြမယ်လေ ကောင်းဘူးလား :)
ကွ်ျတော် ဒီလို အက်ဆေးလေးတွေများရှိရင် မေးပိုပေးပါလား ကျေးဇူးတင်လျှက်။
ဧရာဝတီ ဧရာဝတီ ...
မြစ်ဆုံတော့ ရောက်ဖူးချင်သေးတယ် ဗျာ ... :)
မြန်မာနိင်ငံရဲ့ အလယ်တည့်တည့်ကနေ စီးဆင်းပေးနေခဲ့တယ်
ဧရာဝတီရဲ့ ရေစီးသံကို နားထောင်ကြည့်မိတဲ့အခါ
ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း သဘာဝ ဂီတသံတွေ ကြားရတယ်...။
နှလုံးသည်းပွတ်တွေထဲက နာကျင်လို့အော်သံတွေ ကြားရတယ်...။
အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဖွဲ့သီနေတဲ့ သမိုင်းကဗျာတွေ ကြားရတယ်..။
အားမတန် မာန်လျော့လို့ တောင်းပန်နေတဲ့ ၀မ်းနည်းပက်လက်အသံတွေ ကြားရတယ်...။
ဧရာဝတီ...စကားပြောတတ်လျှင်ဖြင့်.. ဘာတွေ ပြောနေဦးမှာလဲ...။
ကျွန်တော်တို့ ဂရုတစိုက် နားဆင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်...။
အင်းတစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်သား မြစ်ကြီးနားကိုလေ ကျောက်စိမ်းနယ်မြေလေး ကိုစိတ်လည်းဝင်စားတယ် သဘောလဲကျတယ် ရောက်အောင်သွားမှာပါ ဧရာဝတီနဲ့လည်း တွေ့ချင်သေးတာ ကိုးးးးးးးးးးးး:D